Izingubo zendabuko zaseJapan Izingubo zendabuko zaseJapan | Izindaba Zokuhamba
Ingubo yendabuko yaseJapan
UMariela Carril | 09/07/2021 09:30 | Cultura, Japan
IJapane yikhaya lami lesibili. Sengike ngaba khona izikhathi eziningi futhi angisakwazi ukulinda ukuthi ubhadane luphele lubuye. Ngiyalithanda leli zwe, abantu balo, i-gastronomy yalo namasiko alo. IJapan yiPhoenix, akukho kungabaza, futhi phakathi kwezimangaliso eziningi namuhla sizogqamisa i- ingubo yendabuko yaseJapan.
Lapha abantu bagqoka ngendlela abafuna ngayo, uzobona uma uhamba emigwaqweni yakhona futhi akekho obonayo ukuthi ugqokeni. Kepha futhi, wumphakathi lapho abantu banamuhla behlala nabadala, ngakho-ke ikhadi leposi elijwayelekile ukubona owesifazane ogqoke i-kimono eduze kwesikhulu ezithendeni, bobabili belinde isitimela sezinhlamvu.
1 Imfashini eJapan
2 Ingubo yendabuko yaseJapan
Njengoba ngishilo ngenhla ukugqoka kwaseJapan ukuthi bafuna kanjani, ngenzuzo enkulu yokuthi akekho owahlulela. Ungahle uzithele kowesifazane osekhulile ogqoke okomlingiswa we-anime noma indoda esikhulile egqoke njengokuthi kwazi bani, usomabhizinisi okhaliphile, osebenza kwezokwakha, noma izinsizwa eziningana ezishukiwe ngokufakelwa.
Kunezimfashini, impela zikhona, kukhona amaqembu azilandelayo, kepha kimi kubonakala sengathi umehluko yilokho akekho obheka ukuthi omunye wenzani. Ngivela esikweni lapho uma kusetshenziswa okuphuzi ehlobo, sonke sigqoka okuphuzi, futhi nanka umehluko. Ukuthi ukubukeka akubucayi kuhle. Awunawo amabele amakhulu, amajean awakulingani njengoJennifer Lopez? Ubani onendaba?
Ngakho-ke, uma uhlela ukuya eJapan, kufanele wazi ukuthi ukuhamba ezitaladini zayo nokubuka abantu bayo kungukuhlangenwe nakho okuhle kwamasiko. Futhi yebo, okwakamuva, okungajwayelekile nokumangazayo kuzoxubana nokwendabuko, nama-yukata, ama-kimono, izimbadada ze-geta nokuningi.
Ingubo yendabuko yaseJapan yi-kimono. Ngokuvamile, ama-kimono enziwa nge- izindwangu zikasilika, banemikhono emide esukela emahlombe iya ezinyaweni, noma icishe ibanjwe ngebhande elibanzi, i- obi, nasempilweni yansuku zonke bahlala emicimbini ekhethekile noma emikhosini yendabuko.
UKimono kuvimbela ukunyakaza kwabesifazane futhi yingubo ebizayo futhi ethatha isikhathi ukugqoka. Kuhambisana nendima yabesifazane emphakathini wendabuko waseJapan, lowo womsizi, ohamba naye, ukuhamba ngesibiliboco. Kukhona ama-kimono asebusika futhi kukhona ama-kimono asehlobo, ilula, ayinamicikilisho kancane, eyaziwa njenge yukata. Izingane noma abantu abadala abasha kufanele bagqoke ama-yukata emikhosini yasehlobo, njengoba uqiniseka ukubona kumanga amaningi naku-anime.
I-kimono ingeyabesifazane nabesilisa. Inemicikilisho futhi inani lezendlalelo liphathelene nezinga lezomnotho lomuntu noma ukubaluleka kwayo emphakathini. Ama-kimono abesifazane empeleni ayinkimbinkimbi ukwedlula awabesilisa futhi anemininingwane eminingi. Izendlalelo azimbozeki futhi lokho kuvumela ukudlala okuhle impela kwemigqa enemibala.
Indwangu okwenziwa ngayo i-kimono inobude obubizwa tan, cishe amamitha ayi-11.7 ubude futhi cishe amasentimitha angama-34 ububanzi kuyinto ejwayelekile. Kusikwa izingcezu ezimbili kulokhu tan, enye yenze ingaphambili nephambi kwekhawunta kwesokudla kanti enye yenzelwe ozakwabo abafanele. Umthungo omile wenziwa maphakathi nendawo futhi kulapho zombili lezi zingxenye zihlangana khona nobude besikhathi esizayo bugoqiwe futhi buthungwe emzimbeni ukwakha imikhono.
Ukujula kwemikhono kuyehluka kuye ngengubo. Ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, kwenziwa ama-kimono ngawo amathis, indwangu ephothiwe kasilika etholwe ngemifece engaphelele. Kamuva, ngokwethulwa kwemishini yendwangu, ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwentambo esezingeni eliphansi kwalungiswa futhi ngaleyo ndlela kwenziwa indwangu ekhanyayo, ejiyile, eqinile futhi eshibhile. Le ndwangu yayidaywe ngodayi bokuzenzela, ngamasu amasha, ngakho-ke bonke abesifazane baseJapan baqala ukukhetha i-meisen ukwenza ama-kimono abo angavamile.
Olunye uhlobo lwe-kimono yi- I-Tsukesage, okuthe xaxa kancane kuneHomongi kimono. Inemiklamo elula futhi enesizotha emboza indawo encane engezansi kwesinqe.
Kunesitayela sokugqoka kwendabuko okujwayelekile kakhulu geisha I-Kyoto, i SUsohiki. Lezi zintokazi zigqoka ngayo uma zidansa noma zenza ubuciko obujwayelekile. Umbala nokwakheka kwale ngubo kuncike enkathini yonyaka nasemcimbini i-geisha eya kuwo.
Ingubo ende, impela impela uma uyiqhathanisa ne-kimono ejwayelekile, ngoba yenzelwe ukuthi isiketi sihudulwe phansi. I-susohiki ingalinganisa ngaphezu kwamamitha amabili futhi kwesinye isikhathi ubizwa nangokuthi uHikizuru. Bayayisebenzisa futhi lapho becula izingoma zeMaikowho, bedansa, noma bedlala i- shamisen (insimbi yomdabu yaseJapane enezintambo ezintathu). Enye yezinto zakhe ezinhle kakhulu izesekeli I-Kanzashi ie, isesekeli sezinwele Yenziwe ngokhuni olunamacwecwe, igolide, isiliva, igobolondo lofudu, usilika noma ipulasitiki.
Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi kunezitayela eziningana zama-kimono, ngakho-ke nanka amagama ezinye ezaziwa kakhulu: umabhebhana, enemikhono emide futhi igqokwa ngabesifazane abasebasha lapho beba neminyaka engama-20, i- homongi, semi-formal, feminine, to use emishadweni yabangane, the Komon Kuyinto evamile futhi banemiklamo eminingi, futhi ekugcineni i-kimono yamadoda, ihlala ilula, ihlelekile ngokwengeziwe, ihlanganisa ijekethi ye-hakama ne-haori.
Futhi i- yukata? Njengoba sishilo, kunjalo ama-kimono alula futhi alula, ezenziwe ngokotini noma ngezintambo zokwenziwa. Zigqokwa ngamantombazane nabafana abancane futhi zithandwa kakhulu ngoba zilula ukuzinakekela futhi zishibhile. AmaYukata ayedaywe indigo ngokwesiko, kepha namuhla kunemibala ehlukahlukene nemiklamo edayiswayo. Uma uvakashela i-ryokan noma i-onsen uzoba neyodwa egumbini lakho oyisebenzisayo ngenkathi uyisivakashi.
Enye ingubo yendabuko yaseJapan yiyona hakama. Kungenxa yamadoda futhi kuyingubo egqokwa ngaphezu kwe-kimono. Iboshwe okhalweni futhi iwela cishe emadolweni. Imvamisa le ngubo ibitholakala ngombala omnyama nomhlophe, enemivimbo, yize kukhona namamodeli aluhlaza okwesibhakabhaka. Uzobona ama-hakama kuma-sumo wrestlers, lapho eya emcimbini womphakathi noma emicimbini esemthethweni. Kuyinto efana isibonakaliso sendoda yaseJapan.
Enye ingubo yendabuko yi- injabulo esebenzisa i amadoda emikhosini, ikakhulukazi labo abadansayo. I-happi ihembe elinemikhono endololwaneni. Inengaphambili elivulekile, liboshwe ngemichilo kanti ngenkathi i-happis ehlotshiswe ngezithonjana nemiklamo ehlabayo isetshenziswa emikhosini, kweminye imicimbi iboshelwa okhalweni ngebhande futhi ilula. Eminye imiklamo isendaweni yentamo futhi kwesinye isikhathi inyuka ngemikhono iye emahlombe.
Futhi ekugcineni, ngokuya ngobulula sinayo jinbei, okungajwayelekile, okufana namaphijama ethu, ukuhambahamba ekhaya noma emikhosini yasehlobo. Zigqokwe abesilisa nezingane, yize muva nje abanye besifazane bezikhetha.
Kulezi zingubo zendabuko zaseJapan kunezelwa izimbadada zokhuni ezaziwa ngokuthi uthole, egqoke amasokisi amathebhu noma engenawo, ama-zori, izimbadada zesikhumba noma zendwangu, ibhantshi le-haori eligqokwa ngabesifazane nabesilisa futhi kanzahi, amakamu yinhle kakhulu esiyibona emakhanda abesifazane baseJapan.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » Japan » Ingubo yendabuko yaseJapan
Iziqhingi ezinhle kakhulu zamaGrikhi
Amahhotela ahamba phambili ePunta Kana